Ny vokatry ny COVID 19 amin'ny lamba vita amin'ny lamba sy lamba vita amin'ny lamba
Rehefa ny fahasalaman'ny olona sy ny fiveloman'ny olona no anton-javatra lehibe indrindra amin'ny fiainany andavan'andro, dia toa tsy dia misy dikany kokoa ny filàn'ny fitafiany.
Raha ny voalaza, ny haben'ny haben'ny indostrian'ny akanjo manerantany dia misy fiantraikany amin'ny olona maro any amin'ny firenena maro ary tokony hotadidina tahaka ny rehefa miverina amin'ny fomba mahazatra isika, dia hiandrasan'ny besinimaro ny fisian'ny vokatra mba hahitana ny lafiny teknika sy fomba / fomba fiaina. fepetra takiny sy iriny.
Ity lahatsoratra ity dia mijery amin'ny antsipirihany ny fomba fitantanana ireo firenena famokarana eran-tany, izay tsy nitaterana matetika ny zava-misy azy ary ny fifantohana dia apetraka kokoa amin'ny tontolon'ny mpanjifa. Ity manaraka ity dia fanehoan-kevitra notaterina avy amin'ireo mpilalao mavitrika miasa amin'ny rojistika famatsiana hatramin'ny famokarana mankany amin'ny fandefasana entana.
Satria ilay firenena nanombohan'ny COVID 19 (fantatra koa hoe coronavirus), dia niteraka fikorontanana voalohany avy hatrany i Shina taorian'ny fanakatonana ny Taom-baovao Shinoa. Rehefa tsinontsinoavina ny tsikombakomban'ity viriosy ity, mpiasa Shinoa maro no nifidy ny tsy hiverina hiasa raha tsy milamina tsara amin'ny fiarovana azy ireo. Nampidirina tamin'izany dia famerenam-bokatra amin'ny famokarana ivelan'i Shina, indrindra ho an'ny tsenan'i Etazonia, noho ny saram-pitondrana nateraky ny fitondrana Trump.
Rehefa manakaiky ny roa volana isika hatramin'ny Taom-baovao Sinoa, mpiasa maro no tsy niverina niasa satria tsy fantatra ny fahatokisana momba ny fahasalamana sy ny fiarovana ny asa. Na izany aza, mbola nitohy tamim-pahombiazana i Shina noho ireto antony manaraka ireto:
- Ny volan'ny famokarana dia nafindra tany amin'ireo firenena famokarana lehibe
- Ny salanisan'ireo mpanjifa farany dia nofoanana ny vola kely noho ny tsy fisian'ny fahatokisan'ny mpanjifa, izay nanamaivana ny tsindry sasany. Na izany aza, efa nisy ny fanafoanana avy hatrany
- Fiantohana ho tranon-jorobory azo ekena ny vokatra vita, izany hoe ny fandefasana ny yarns sy ny lamba any amin'ireo firenena famokarana fa tsy mitantana ny CMT ao amin'ny firenena.
tato anatin'ny dimy ambin'ny folo taona farany, i Bangladesh dia nandray tsara ny filàna manafototra ireo akanjony. Nandritra ny vanim-potoanan'ny Lohataona fahavaratra 2020, vonona kokoa izy io ho an'ny fanafarana fitaovana manta ary hampiasana ny safidy eo an-toerana. Taorian'ny fifanakalozan-kevitra an-tsipiriany, nanoro hevitra ireo mpanondrana lehibe fa ny fanafahana ho an'i Eropa dia / 'orinasa toy ny mahazatra' ary ny fanondranana entana any Etazonia dia tantanina miaraka amin'ireo fanamby isan'andro ary mangataka fanovana natao.
Na dia eo aza ny hetsika fanjairana goavana avy any Chine, dia nisy ny olana natambatra tamin'ny fiantraikan'ny viriosy amin'ny faritra mahery vaika.
Ity manaraka ity dia valiny mahitsy amin'ny fanontaniana napetraky ny indostria - ny valiny dia ny marimaritra iraisana.
John Kilmurray (JK): Inona no zava-mitranga amin'ny famatsiana fitaovana manta - eo an-toerana sy any ivelany
"Ny faritra sasany amin'ny fanaterana lamba dia voakasika fa ny milina kosa tsy mitsaha-mitombo."
JK: Ahoana ny famokarana orinasa, asa ary fanaterana entana?
"Miasa mafy ny asa. Maharitra aloha loatra ny maneho hevitra momba ny fanaterana satria mbola tsy mbola nahalala olana isika."
JK: Ahoana ny fihetsiky ny mpanjifa sy ny fihetseham-po amin'ny baiko ankehitriny sy amin'ny manaraka?
"Ny fiainana dia manapaka ny baiko fa ny QR ihany. Fanatanjahantena, satria lava ny fihodinan'izy ireo dia tsy hahita olana eto isika."
JK: Inona avy ireo fiantraikany lojika?
"Miambena amin'ny fitaterana an-tanety, ny sisintany mankany amin'ny sisintany dia misy backlogs (ohatra: China-Vietnam). Aza atao fitaterana ny tanety."
JK: Ary amin'ny fifandraisan'ny mpanjifa sy ny fahatakarany ny fanamby famokarana?
"Amin'ny ankapobeny dia mahazo an'izy ireo izy ireo. Ireo orinasan'ny mpivarotra (agents) izay tsy hainy, satria tsy hitondra ny habakabaka izy ireo na handefitra."
JK: Inona no fahasimbana fohy sy fohy amin'ny rojo famatsiana antenainao amin'ny toe-javatra itony?
"Nafana ny fandaniana…"
Indonezia & India
Azo antoka fa nitombo ny volan'i Indonezia, indrindra rehefa mifindra any Chine ny vokatra vita. Mitohy amin'ny fananganana isaky ny singa ilain'ny rojotra famatsiana izany, ho vita ve, fametahana na marika fonosana.
Indray dia ao anatin'ny toe-javatra tsy miova i India mba hanitarana ny vokatra avy amin'ny ditin-damba miavaka mba hifanaraka amin'ny lamba vita any Shina na ny antsy sy ny woven. Tsy misy fiantsoana manan-danja ho an'ny fahatarana na fanafoanana ny mpanjifa.
Thailand & Kambodza
Ireo firenena ireo dia manohy ny lalan'ireo vokatra mifantoka izay mifanaraka amin'ny laharam-pahametrany. Fanjairana maivana miaraka amin'ireo akora maimaim-poana arahana mialoha, hiantohana fa miasa ny mifangaro, fanamboarana ary safidy isankarazany.
Toa an'i India amin'ny fomba sasany, Sri Lanka dia nanandrana namorona fanokanana vokatra natokana ho an'ny tenany, avo lenta, milina, anisan'izany ny indostria, ny akanjo sy ny fanasana, ary koa ny fametrahana ireo fomba famokarana eko. Tsy tandindomin-doza ny famokarana sy ny fandefasana ankehitriny.
Ny vaovao avy amin'ny fantsom-pokonay sy ny lamba dia mampahafantatra anay fa ny baiko napetraka rehetra dia fandefasana araka ny nangatahina. Na izany aza, tsy ho avy amin'ireo mpanjifa ny vinavina mialoha.
Niverina tany amin'ity faritra ity ny fahalianana, satria manontany tena ny fahatokisana an'i Shina ary raha ny vidin'ny vidin'entana amin'izao fotoana izao no hijerena azy.
Ho fehiny, ny vanim-potoana ankehitriny dia ampiharina amin'ny ampahany kely amin'ny tsy fahampian'ny fandefasana. Hatreto anio, ny tena lehibe indrindra dia ny vanim-potoana ho avy miaraka amin'ny tsy fahatokisan'ny mpanjifa.
Ara-drariny ny hanantena fa tsy ho avy amin'ity vanimpotoana ity ny milina, mpamokatra ary mpivarotra sasany. Na izany aza, amin'ny alàlan'ny fifandraisany amin'ny fitaovana maoderina fifandraisana, ny mpamatsy sy ny mpanjifa dia afaka mifanohana amin'ny alàlan'ny fepetra mety sy mahomby.